yakanakisa apple ipad mini (2019) cyber Muvhuro dhizaini inogona kunge yatove pano
Kuru Nhau & Ongororo Iyo yakanakisa Apple iPad mini (2019) Cyber ​​Muvhuro dhizaini inogona kunge yatove pano
Iyo yakanakisa Apple iPad mini (2019) Cyber ​​Muvhuro dhizaini inogona kunge yatove pano
NaNeChishanu Chishanu mugirazi rinotarisa kumashure, inguva & maapos; ku ... kuenderera kushandisa, sevazhinji uye gumi nemaviri anotyisa Cyber ​​Muvhuro 2020 madhiri inoita kunge yakatanga kutanga kune vakawanda vatengesi vemuUS.
Yakanakisisa Kutenga, semuenzaniso, iri kutopa izvo zvinogona kupedzisira zvave zvese-kutenderedza mukurusa iPad Cyber ​​Muvhuro kusimudzira iine $ 100 dhisikaundi inowanika yeApple & apos; s ipfupi inoderedza piritsi mune dzinoverengeka dzakasiyana dzekuchengetedza shanduro uye sarudzo dzeruvara.
Nehurombo, iyo yekupinda-chikamu 64GB Wi-Fi-chete iPad mini (2019) yekumisikidza haina & apos; inoita kunge isipo mune zvese panguva yekunyora uku. Padivi rakajeka rakajeka rezvinhu, iwe parizvino unogona kutenga dhijitari yekukwidzira-inoshamwaridzika 256 gig modhi isina kubatanidza nharembozha kwema 30 chete madhora pamusoro pemutengo wenguva dzose we $ 399 weiyo yakachipa yechishanu-gen iPad mini musiyano kunze uko.
$ 100 yabviswa (18%)$ 44999$ 54999 Tenga paGoodBuy
$ 100 yabviswa (19%)$ 42999$ 52999 Tenga paGoodBuy
Pa $ 449.99 pachinzvimbo che $ 549.99, izvo & apos; zvakaoma kupokana nehunhu / mutengo muyero we 7.9-inch slate ichibatanidza zvambotaurwa 256 gigs yemukati yekuchengetera nzvimbo ine hunhu (na Apple zviyero) 3 gigs ekurangarira. Iyo chitubu 2019-yakaburitswa iPad mini zvakare inorongedza zvine simba zvine musoro Apple A12 Bionic processor ichipenya mubhatiri rehupenyu hupenyu dhipatimendi futi.
Asi iyo yakasviba isoft software uye yakanyanya-yakapinza Retina inoratidzira zviri zviviri iwo makiyi ekutengesa akakosha pano, kunyangwe dhizaini yapera yechinyakare, iine rakakura bezels rakakomberedza rakataurwa yepamusoro-soro 7.9-inch screen mutambo wemitambo resolution ye 2048 x 1536 pixels.
Iyo imwechete $ 100 dhisikaundi inoshandawo kune iyo LTE-inogoneswa 64GB iPad mini 5, iri kudhura chaizvo izvozvi kupfuura iyo yeWi-Fi-chete 256GB mukoma, pa $ 429.99. Ehezve, iwe ungangoda kukurumidza uye kutora mukana weiyi yakanaka yakawanda zvisati zvamboitika, izvo zvinogona kupera nguva pamberi peCyber ​​Muvhuro kunyangwe kukamba nekuda kwekuda kwakanyanya.
sei mafoni akadhura
Akanakisa Baba & maapos; s Zuva rezvipo mazano uye madhiri (2021)
Yakanakisisa Kutenga & apos; s yakavhurika-bhokisi kutengeswa inosanganisira Apple Watch Series 4 mhando
Samsung nhare dzinomhanya Android 10 kurasikirwa neDaydream VR rutsigiro
Iyo yakanakisa foni inoratidza 2021
Mobvoi ichaendesa Google uye Samsung & apos; s 'Wear OS 3.0' kuTicWatch Pro 3